NLP | Hla Hla Htay's Notes
Google OCR for Myanmar Text January 17, 2018
Filed under: NLP — hhh123 @ 5:55 am
Tags: Drive, google, OCR
မြန်မာအတွက် Google OCR စမ်းသပ်သုံးကြည့်ခြင်း။ (သူများတွေလဲရေးထားတာတွေ့ပါတယ်။)
မနေ့က google ရဲ့ OCR ကို စမ်းသပ်သုံးစွဲပါတယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်။ Myanmar3နဲ့ထုတ်ပေးတယ်။မြန်မာစာတွေကို ရိုက်စရာမလိုဘဲ ပြင်စရာလောက်ပဲလိုတာလေ။ ဒါပေမဲ့ စမ်းသပ်တာ က ဈေးတော့ကြီးပါတယ်။ Mpt အင်တာနက် က ၁၇ မျက်နှာလုပ်တာ 1G လောက်တော့ အသာလေးလျောသွားတယ်နော်။
(၁) အရင်ဆုံး စာမျက်နှာတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ။ အဲဒါက လွယ်တယ်လေ။ Adobe professional ဆိုရင် ဖိုင် ထဲမှာ စာမျက်နှာ ဘယ်လောက်များများ Save as jpeg နဲ့ဆိုရင် သူက စာအုပ်တလုံးကို မှာ ရှိတဲ့ဟာမှန်သမျှကို ၁ရွက်ချင်းထုတ်ပေးလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ ဖိုဒါလေးထဲမှာ Save as jpegလုပ်တာကောင်းတယ်။
(၂)ပြီးရင်Google drive ကို upload လုပ်ပါ။
(၃)တင်ပြီးရင် အဲဒီ ပုံ/Fileကို Right click -> Open with Google Docs နဲ့ဆိုရင် ခဏစောင့်ရင် text ကိုပြောင်းပေးမယ်။
(၄) အဲဒါကို File-> download as -> txt / doc လုပ်ပါ။ ဒေါင်းလုပ်မှာ လဲ ရွေးချယ်လို့ရပါသေးတယ်။
စာမျက်နှာများရင် များသလို လက်တော့ဝင်တာပေါ့နော်။
Google OCR for Myanmar text are AMAZINGLY good. It can produce Myanmar text in Myanmar3 Unicode format.
1. Make pages into pictures. You can take photos. Or if you use Adobe Professional, you can use “Save as Jpeg”. It will save each pages into separate Jpeg files.
2. Upload file to Google Drive.
3. Right click to that file -> Open with Google Docs
4. Wait forawhile and it will produce text. You can download file as txt/Doc.
Import tmx to Omega-T May 6, 2016
Filed under: Language,NLP — hhh123 @ 6:35 am
Tags: Olifant, Omega-T, TM, tmx, Translation
Open OMEGAT and select Project> Properties.
Select folder with TMX file under Translation Memory directory.
Open OLIFANT and select File> Open.
Select the TMX file.